Fiakaran'ny rano :: Mbola tandindomin-doza ireo mponina manamorona an’i Sisaony • AoRaha
Anisan’ny mbola tandindon’ny loza noho ny fiakaran’ny rano ireo kaominina naharay izany tamin’ny alahady raha mitohy ny rotsak’orana ato anatin’ny herinandro. Ny fiakaran’ny reniranon’i Sisaony, noho ny fahabetsahan’ny rotsak’orana, rahateo no nandrafetana an’ilay filazana loza miloko mavo afak’omaly, na dia efa nihena aza ny haavon’ny rano ao aminy.
« Nidina 0,11 m ny haavon’ny rano eny amin’iny renirano iny tao anatin’ny adiny valo raha jerena avy maridrefin’Andramasina. Nahatratra 0,56m kosa ny fidinany avy eo amin’ny mari-drefin’Ampitatafika », raha ny tatitra avy ao amin’ny Biraom-pirenena mihsana ny loza voanjahary ( BNGRC), omaly tolakandro.
Tsy nanome fanampim-baovao mikasika an’io fiovaovan’ny haavon’ny rano io kosa ny avy amin’ny Manamahefa miaro amin’ny tondra-drano eto Antananarivo (Apipa).
Etsy an-kilany, manahy ny mety hitomboan’ny isan’ireo tra-boina ny mponina manamorona an’iny renirano iny raha mihamafy ny rotsak’orana ato anatin’ny andro maromaro. Anisan’ny velom-panahiana ireo ao amin’ny fokontany Antandrokomby eny Anosizato Andrefana.
« Fianakaviana valopolo mahery no ahiana ho tra-boina sy voatery hiala amin’ny tranony raha misy tokoa izany. Na izany aza, efa ho roa taona izao no tsy nisy tra-boina intsony teto aminay satria tsy nikija be toy ireny niseho ireny ny orana”, hoy Rasoarinirina Arimalala, lehiben’ny fokontany Antandrokomby, omaly.
Fianakaviana roa tao amin’io fokontany io no niala tamin’ny tranony avy hatrany raha vao nanomboka niakatra ny rano, afak’omaly. Efa niverina tamin’ny ankohonany kosa izy ireo nanomboka omaly.
“Miezaka manadio izahay satria niboiboika niditra tato ny rano. Niendaka avokoa ny lokon’ny fanaka nentin’ny rano. Tsy nisy azo nivezivezena fa nahiana ho lasan’ny rano ny ankizy ”, hoy i Léonie, renim-pianakaviana monina eny Antandrokomby. Mbola manano sarotra an’ity renim-pianakaviana ity kosa ny fanamainana an’ireo fanaka sy fitaovana ao an-tokantranony hany ka bobongolo ny ankamaroany.
Toetr’andro :: Ho betsaka ny orana eto Analamanga
Antso vonjy amin’ny fitsaboana :: “Mila namana” i Thiera Bruno